yokuqalisa >> IMantenimiento yeShishini
El Ukulungisa ulondolozo lolona hlobo luhoyiweyo nolungajongelwa phantsi, kodwa ayibalulekanga kangako kwiiprojekthi zethu nakwisicwangciso sethu sokugcinwa kuyo nayiphi na inkampani efuna ukusebenza kulondolozo ngendlela yobungcali.
Sikhumbula eyahlukileyo Iindidi zolondolozo ezikhoyo kwaye esele sithethile ngazo kwaye ezinye iindlela ezinje RCM
Umxholo wokulungiswa kolondolozo kubandakanya imisebenzi engaqhelekanga kwisebe lolondolozo kodwa ziyahambelana kwaye kufuneka sizithathele ingqalelo kwaye sisebenze kuzo.
El I-TPM iqulathe ukudityaniswa phakathi kwesondlo kunye nemveliso. Kwi-TPM umqhubi unikwa uxanduva lokugcina. Oku kufuna iimfuno ezithile, ezinje ngoqeqesho oluthile lomqhubi kunye nokuba alwamkele uxanduva. Kungenxa yokuba ukuba sinyanzela nje kodwa umsebenzi akaziva edityanisiwe kwaye engafuni ukuthatha inxaxheba kwimodeli, ayizukusebenza kakuhle.
Amandla anje ngala Izangqa zomgangatho ngaphakathi kwemveliso yenkampani bayafakwa kulondolozo.
Kwiimeko zezoqoqosho ezikhoyo ngoku kufuneka kubekho ukhuphiswano ukuze baphile kwintengiso eyoyikekayo. Oku kufuna ukupheliswa kweziphene zemveliso. Ukuvelisa ukunyamezelana ngaphandle okanye ukugqitywa komphezulu womhlaba akuvumelekanga, kwaye nokusilela akubangelwa zizixhobo ezonakalisiweyo.
Ngokuzenzekelayo kunye nokwaziswa kweerobhothi (Umatshini oZenzekelayo) ubuchule obufunekayo bobuchwephesha bonyuswe kubasebenzi bemigca, kodwa ngaphezulu kwako konke kulondolozo. Kuya kufuneka abasebenzi abaqeqeshiweyo nangakumbi.
I-RCM (Ulondolozo oluGxile kwiZiko)
El I-RCM (Ulondolozo oluGxile kwiZiko), okanye ulondolozo olujolise ngokuthembekileyo, bubuchule obujolise ekuphuhliseni isicwangciso se ulondolozo kumzi-mveliso. Oku kuvumela ukufumana uthotho lwezibonelelo ngaphezulu kobunye ubuchwephesha, ukufumana inzuzo ukuthintela ukubuyisela ezinye iinxalenye rhoqo.
Ekuqaleni, i-RCM yaphunyezwa icandelo lomoya, apho ezi ndleko zotshintsho zazibiza kakhulu, nto leyo eyadala iingxaki zezoqoqosho kwiinkampani zeli candelo. Emva kwexesha yayinwenwela nakwamanye amacandelo oshishino ngenxa yempumelelo enkulu eyayinayo kwicandelo elikhankanywe ngasentla.
El Ulondolozo lwangaphambili Inye esekwe kuvavanyo olwenziwa ngamaxesha athile ukumisela imeko nokusebenza kwezixhobo kunye nezixhobo. Iingcali ezinikezelwe kolu hlobo lokugcinwa kwemizi-mveliso kuya kufuneka ukuba zibe nolwazi olunzulu ngezixhobo abazijongayo, kwaye bazi uthotho lwezinto okanye izinto ezinokuchaphazela ezi nkqubo.
por ejemplo, imisebenzi yolondolozo kufuneka ibazi ubushushu okanye uluhlu lwamaqondo obushushu asebenzayo anyamezelwe yinkqubo, uxinzelelo, ukungcangcazela okwamkelweyo okuphezulu, inani lemijikelezo eyamkelayo ngaphambi kokophuka, iiyure zomsebenzi, yazi ukusilela okunokubakho, njl. Yonke into kuye kwafuneka ukuba igqitywe ngoncedo lolwazi oluvela kumenzi wezixhobo okanye, ukusilela oko, ngophando olunzulu kunye nohlalutyo.
El Ulungiso lolungiso Yiyo eyenziwayo xa ukusilela sele kwenzekile. Oku kuhlala kuxhaphakile kumashishini amaninzi, ngakumbi amancinci. Kodwa oko akuthethi ukuba yeyona nto ilungileyo, nangona ngabavelisi abancinci okanye iindibano zocweyo, iindleko okanye ubunzima beemodeli zokuthintela kunye nokuqikelela zinokwenza ukuba ulungiso lube luncedo. Nangona kunjalo, incinci, ilahleko ngenxa yokungasebenzi ayizukulunga kwiinkampani ezinkulu.
Kule modeli, ayisiyiyo kuphela ukulungiswa kokonakala okanye ukutshintsha kwezinto ezingasebenziyo, ezibonwayo okanye ezinye izifundo zihlala ziqhutywa ukumisela imeko yenkqubo, ukucoca, kunye neminye imisebenzi yolondolozo xa kukho imfuneko, njengokuthambisa, njl.
El isicwangciso sesondlo icwangciselwe iseti yezenzo okanye imisebenzi eyilelwe ngokukodwa ukubakho kufakelo okanye kumatshini. Ngale ndlela, yenzelwe ukuthintela ukungaphumeleli okunokubakho, nangona oko kungaqinisekisi nge-100% ukuba zinokumiswa zonke. Kwimeko nganye, indlela yokwenza inokwahluka, kuba zonke izixhobo azidingi imisebenzi efanayo yokulungisa. Inxulumene ngokusondeleyo ne ulondolozo lolawulo.
El Ulondolozo lokuthintela inobunkunkqele, kwaye ibandakanya ungenelelo ukunqanda ukusilela. Kule meko, zisekwe ekuthembekeni kwezixhobo, kwaye kuxhomekeke kwimeko, imisebenzi yolondolozo lweshishini iya kwenziwa ngaphezulu okanye ngaphantsi kwamaxesha aqhelekileyo.
Eyona njongo iphambili yile gcina izixhobo nezixhobo. Ukongeza, njengaleyo iqikelelweyo, ihlala isenziwa ngoomatshini abasebenza, ke oko akuthethi ukunciphisa imveliso kwaye kugcina ukufumaneka okuphezulu okunqwenelekayo kwezi ndawo apho ixesha lokungasebenzi libiza kakhulu.
Phakathi kwemisebenzi yolondolozo lokuthintela, isuka ekucoceni ngokulula kwezixhobo ukuze sebenza ngokufanelekileyo, kutshintsho lwamalungu agugileyo phambi kokuba asilele, ukutshintsha kwezinto zokuthambisa, njl., Kuxhomekeke kwizindululo zomenzi womatshini, okanye uluvo lweengcali. Ke ngoko, ikwathintela ukusilela ngaphambi kokuba kwenzeke, kanye njengokuxelwa kwangaphambili.
Ukuba ufunda le nto ufuna ulwazi oluthe kratya. ungaphoswa zezi zihloko ziphambili zolondolozo lweshishini The isicwangciso sesondlo, izixhobo I-CMMS kunye Iindidi zolondolozo.
Okwangoku Ukwenza ikhompyuter kwimisebenzi yolondolozo kuthethe ukutsiba okukhulu kumgangatho xa kuthelekiswa nendlela ebisebenza ngayo ngaphambili. Ayivumeli kuphela ulawulo olungcono, ikwanceda ekuthinteleni ukusilela okunokwenzeka kunye nokubeka iliso kwiiparameter ezinokuchaphazela umatshini okanye ufakelo.
I-CMMS imele Ulawulo lweKhompyutha oluNcediswayo. EsiNgesini iyahambelana nesicatshulwa esithi CMMS (Inkqubo yoLawulo lweSondlo kwiKhompyuter). Ngokusisiseko yisoftware okanye isuti yeenkqubo ezibonelela ngothotho lweenkonzo ze ukugcinwa kwenkampani.
El ulondolozo mveliso Yindlela efanelekileyo yokuqinisekisa ukuba zonke izixhobo osebenza nazo zikwisimo esifanelekileyo, uqinisekisa imveliso kunye nomgangatho wemveliso elungileyo ngawo onke amaxesha. Kuphela kungumgaqo-nkqubo olungileyo wolondolozo apho ukungaphumeleli kunye nokonakaliswa okunokubakho kungancitshiswa.
Yintoni ulondolozo lweshishini
Ulondolozo lweshishini yinkqubo edibanisa uthotho lwee imigangatho kunye nobuchule ukugcina oomatshini kunye namancedo alo naluphi na uhlobo loshishino okanye umasifundisane. Ukufezekisa ulondolozo loomatshini kunye nezixhobo ezisetyenzisiweyo, kunye nokunciphisa ukonakala okukhulu, kufuneka ube nomgaqo-nkqubo olungileyo.